6 Sababaha ansaxa ah ee Iibsashada Liiska B2B ama B2C | Martech Zone
6 Sababaha ansaxa ah ee Iibsiga B2B ama B2C rajada liistada
Wednesday, May 21, 2014 Jimco, Juun 8, 2016 Douglas Karr
Ma maqlaysaa qeylada? Waa yaabe .. Jenn Lisak sameeyey markii ay soo dhigtay barta Twitter-ka meelaha loogu talagalay soo iibso liisaska ganacsi ee saxda ah. Qaylada xanaaqa waxay ahayd mid deg deg ah oo hay'adeena xitaa hal qof ayaa ku tilmaamay anshax xumo. Tweets-ku waxay ahaayeen kuwo aad u qosol badan oo Jenn ka saaray Tweet-ga isla markaana joojiyay wadahadalkii.
Markii Jenn ii sheegtay falcelinta, runtii waan xanaaqay. Marka hore, layaabka qof ku sugan madal suuq geynaysa iyo waxay si qarsoodi ah u iibisaa xogteeda waa yara yaab. Marka labaad, falcelinta degdegga ah ee Jenn heshay waxay ahayd mid aan la fahmi karin. In kasta oo nimcada Jenn, is-hoosaysiinta iyo khibradda… dadkii iyada raacay isla markiiba waxay u qaateen in liisaska loo isticmaali doono shar.
Qiyaasta waxay ahayd in liisaskan ay ahaayeen SPAM wax laga sheego dadka. Haa… suuq xilliye iyo wakaalad ku takhasustay isgaarsiinta emaylka, wada-hawlgalayaasha on a boosteejo email ah, oo iskaashi muhiim ah la leh a madal samatabbixinSome waxay u maleyneysaa inay fikrad fiican tahay inaad bilowdo been abuurka ganacsiyada.
Markii aan ku jiray warshadaha tooska ah, waxaan iibsanay liisas aan joogsi lahayn. Heck, mid ka mid ah xeeladaha cajiibka ah ee ololaha madaxweyne Obama ayaa ahaa inuu iibsado malaayiin diiwaanada macluumaadka shaqsiyadeed si loo horumariyo barnaamijyada wacyigelinta bulshada halkaas oo ay macno u sameynayeen… taasoo keentay inuu ka adkaado Hillary Clinton (oo laheyd diiwaanka Dimuqraadiga) isla markaana hogaaminaya hogaanka. doorashada.
Iibsashada xogta waa inay noqotaa maalgashi ganacsi kasta! SPAM-ka? Waa iska soo horjeed!
Ka faa’iideysiga xogta ganacsiga waxay u suurta gelineysaa suuqleyda inay sameeyaan tanno ah ololeyaal aad loo bartilmaameedsado oo ka caawiya inay ka fogaadaan SPAM gebi ahaanba!
Ku Darsiga Xogta liisaska macaamiisha ee hadda jira ayaa kaa caawin kara inaad ku siiso macluumaad ganacsi oo casri ah, xogta qaybaha, macluumaadka xiriirka, iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah. Macluumaadkaas ayaa kaa caawin kara inaad horumariso ololeyaal si gaar ah loo bartilmaameedsaday oo si sax ah loo tilmaamayo.
Nadiifinta Xogta way kaa fogaan kartaa liiska madow, waxay kordhin kartaa sanduuqaaga meelaynta, waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato miirayaasha qashinka, iyo inaad hagaajiso guud ahaan la soo bandhigi karo. Xogta ayaa duugoobi doonta - gaar ahaan cinwaanada emaylka ganacsiga halkaas oo ay kajirto ganacsi sare. Iibsashada liisaska la cusbooneysiiyay ama nadiifinta liistadaada hadda waxay ku wadi kartaa horumarin weyn xagga furan, qiimaha gujinaya, iyo u beddelashada suuqgeynta emaylkaaga.
Helitaanka Xiriirada hore u socodku wuxuu kaa caawin karaa ballaarinta ganacsigaaga. Haddii aan la shaqeynayay xiriir lala yeesho hal shirkad oo aan ku guuleysanay, helitaanka meesha uu u guuray iyo dib u soo bandhigida alaabadaada iyo adeegyadaada ayaa kaa caawin kara dib u soo celinta! In kasta oo haynta ay tahay siyaasadda ugu fiican, haddana macaamiisha dib-u-soo-celinta ah ee horay u dhaqaaqay waa kuwo wax ku ool ah sidoo kale!
Falanqaynta Muuqaalka - xog uruurinta macaamiisha iyo xog aruurintu waa wax weyn, laakiin lifaaqa xogta ayaa ku siin kara dhammaan macluumaadka ay ganacsigaagu u baahan yahay si uu kaaga caawiyo fahamka dadkaas ama ganacsiyada aad horeba ganacsiga ula lahayd. Saamaynta dadka iyo saadaasha hawada ayaa kaa caawin kara inaad fahamto warshadaha iyo juqraafiga aad gaarto (ama aadan ahayn), waxay kaa caawineysaa inaad horumariso istiraatiijiyado nuxur leh, waxayna kaa caawineysaa inaad go'aamiso waddooyinka xayeysiinta ee ugu habboon si aad u hesho farriinta saxda ah ee qofka saxda ah.
Ganacsiga Cusub - ma fahantay gelitaankaaga suuqa? Ma jiraan ganacsiyo cusub oo halkaa ka jira ama rajo cusub oo halkaas ka jirta oo ay tahay inaad u suuq geyso? Liisaska cusub ee meheraddu waa miino dahab u ah warshado badan! Maaha ISBADBAADIN, laakiin waa helid iyo xiriirro lala yeesho iyaga. Haddii aad tahay hay'ad bixisa adeegyo sumadaynta iyo nashqadeynta, yaa si fiican uga suuq geynaya liiska meheradaha kaliya codsaday oo helay shatiyada ganacsigooda. Sidee kale oo aad u heli kartaa iyaga oo aan haysan xogta?
Liisaska Rajada - ma waxaad tahay ganacsi hadda uun soo gaadhay maaliyad maalgashi? Waa waqtigii aad bilaabi lahayd inaad si firfircoon u raadiso rajooyinka oo aad wax uga iibiso. Suuragal kama ahaan kartid dadaalada suuq geynta ogolaanshaha ee salka ku haya inaad qabsato oo dadka albaabka kaa garaaco… waxaad waayi doontaa maalgashadayaasha iyo fursadaada. Liisaska 'Prospect' ayaa ka caawin kara kooxdaada iibka inay si wanaagsan u bartilmaameedsadaan wicitaanada ay sameeyaan iyo boosta ay waaxda suuqgeyntaadu taaban karto. Ma jirto wado lagu dhammaystiro tan iyada oo aan la iibsan xog.
Ma u iibsatay xog bartilmaameed u ah ganacsigaaga? Waxaan u shaqeeyey tan oo meherado ah, waxaan ka shaqeeyey keydka macluumaadka iyo suuqgeynta tooska ah, iyo hadda khadka tooska ah. Waxaan gabi ahaanba aqoonsannahay in ogolaanshaha ku saleysan, dadaalka suuq geynta ee gudaha uu wado natiijooyinka ganacsi ee cajiibka ah ee ganacsiyada. Laakiin jaahil kama nihin xaqiiqda ah in xogta la iibsaday ay sidoo kale gacan ka geysan karto qiimeynta, falanqaynta, hagaajinta iyo bartilmaameedka dadaallada iibka iyo suuqgeynta wanaagsan. Waxaa jira soo celin weyn oo ku saabsan xogta la iibsaday!
Waxaa awood ku leh kafaalaqaadeheena, Marna ha noqon.
Tags: iibso xogiibso liisaskalifaaqa xogtanadiifinta xogtaliisaska emaylkafirmographicsganacsi cusubfalanqaynta astaantaliisaska rajada
Feb 13, 2015 markay ahayd 12:07 PM
Maqaalka weyn Douglas, Waxaan raadinayay macluumaad ku saabsan liisaska B2B ama B2C muddo dheer hadda, tani waxay ka caawisay mahadsanid badan, waxaan tan la wadaagi doonaa kooxdayda.
Jacaylka boostadan Douglas!
Iibsashada liisaska e-maylku waxay helayaan kufsi xun laakiin waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu gaadho inbadan oo ka mid ah dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato halka dadaalada suuq-geynta ee soo galaya ay helayaan kala-goyn. Anigu shaqsiyan waxaan u shaqeeyaa shirkad la yiraahdo Clickback oo si gaar ah ula shaqeysa shirkadaha B2B iyo dadaalkooda suuq geynta banaanka.
Dhab ahaantii maqaal aan la wadaagi doono!